SIYAASAD: Koobka Adduunka Oo Fure U Noqday Deminta Colaadda Siyaasadeed Ee Ruushka & Yurub Iyo Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga Oo Ka Degaya Moscow – GOOL24.NET
SIYAASAD: Koobka Adduunka Oo Fure U Noqday Deminta Colaadda Siyaasadeed Ee Ruushka & Yurub Iyo Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga Oo Ka Degaya Moscow
Koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda waddanka Ruushka ayaa maraya meel xasaasi ah oo ay iskugu soo hadheen afar waddan oo kaliya oo dhamaantood reer Yurub ah, hase yeeshee waxa uu yeeshay saamayn kale oo abuurtay isku soo dhowaansho dalalka reer Galbeedka gaar ahaan reer Yurub iyo Ruushka oo markii hore dhinac laga wada ahaa.
Dad badan oo reer Yurub ah ayaa tegay magaalooyinka waaweyn ee Ruushka intii uu socday Koobka Adduunku, waxaanay dhibaato la’aan iyo carqalad la’aan ku mareen meel kasta oo ay doonayeen, iyagoo dalxiisyo ku kala bixiyey dhulka quruxda badan iyo meelaha barafka iyo qabowga looga caagay, halkaas oo indhahoodu kusoo doogsadeen, balse dhinaca kale fursado dhaqaale u noqotay Ruushka.
Ma jirin madax badan oo reer Yurub ah oo ka qayb-gashay xafladdii furitaanka Koobka Adduunka, hase yeeshee xafladda xidhitaanka waxay noqon doontaa mid taas ka duwan, sababtoo ah, waxa marka koowaad Koobka ku guuleysan doona mid ka mid ah dalalka reer Yurub ee markii hore diiday inay ka qayb-galaan xafladdii furitaanka, waxaana khasab ku noqonaya labada dal ee iskugu soo hadha inay madaxdoodu tagaan kulanka ugu dambeeya. Sidaas oo kale, waxa u tegi doona dalal kale oo markii hore ka gaabsaday.
Madaxii ugu horreeyey ee shaaciyey inuu tegayo xafladda xidhitaanka Koobka Adduunka waa ra’iisal wasaare xigeenka waddanka Talyaaniga, sidoo kalena ah wasiirka arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Matteo Salvini.
Ra’iisal wasaare xigeenka oo subaxnimadii hore ee Isniinta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo inuu la kulmo madaxweynaha waddanka Ruushka, Putin iyo wasiirka arrimaha gudaha Vladimir Kolokoltsev.
“Haddii aan ku guuleysto, waxa aan u tegayaa arrimo siyaasadeed iyo kubadda cagta ah. Haddii ay suurtogasho, waxa aan fursadda uga faa’iidaysan doonaa inaan tago ciyaarta finalka Koobka Adduunka ee Moscow kaddibna waxa aan la kulmi doonaa wasiirka arrimaha gudaha Russia si aanu uga heshiino ladagaallanka ururka Dawladda Islaamka oo u muuqda in la jabiyey laakiin aan weli jabin. Kaddib waxa aan la kulmi doonaa Putin.” Sidaas ayuu yidhi Matteo Salvini.
Tallaabadan ayaa ka dhigan mid sahlaysa inuu dib usoo laabto xidhiidhkii carqaladdu gashay muddooyinkii dambe, waxaana la warinayaa inay sidoo kale dhici karto in madaxweyne Putin uu la kulmo madax kale oo reer Yurub ah.